Nzukọ Latin American na Instrument Instruments nke Mmechi Obodo - Geofumadas
Nzukọ Latin America na Ngwaọrụ Ndị A Pụrụ Iche nke Mkpebi Obodo
Jenụwarị, 2013 Akụziri CAD / GIS, Land Management
Ihe mmemme nke Latin America na Caribbean nke Lincoln Institute of አፈር Polish na-akpọsa ogbako a dị mkpa, nke a ga-enwe na Quito, Ecuador 5 ka 10 Mee 2013.
A haziri ya na Njikọ Ọchịchị nke Republic of Ecuador, ọ na-ezube iji kesaa, kesaa ma nyochaa usoro nke ngwa ngwa ngwa ngwa obodo mepụtara ma mejuputa nke ọma na obodo Latin America. Ọ bụ usoro nke ngwa 20, ụfọdụ n'ime ha amachaghị ma họrọ n'okpuru njirisi nke mkpa iji metụta nsogbu dị oke mkpa, ịdị adị nke nnwale doro anya yana ikike ịmegharị na ikike ndị ọzọ na mpaghara ahụ.
Ebumnuche mbụ maka ebumnuche a bụ nkwenye nke ịdị adị (na mmejuputa ọfụma) nke akụrụngwa na-emetụta nsogbu dị oke egwu na atụmatụ ọha na eze na mpaghara ahụ. Nke ka mkpa bụ na ụfọdụ n'ime ngwa ọrụ ndị a amaghị mgbe niile ndị na-eme atụmatụ ime obodo (ma ọ bụ ndị na-eme mkpebi n'ozuzu ha) dịka, dịka ọmụmaatụ, Akwụkwọ ikike agbakwunyere agbakwunyere (CEPAC), nke ejiri ya na São Paulo. Ngwa ndị ọzọ a ma ama, ọ bụ ezie na a maara ha nke ọma, bụ 4 ikekwe n'atụghị anya tụlere, ma ọ bụ n'ihi ajọ mbunobi ma ọ bụ ozi na-adịghị mma banyere ọnọdụ ụfọdụ nke mmejuputa ha, gosipụtara nke ọma site na onyinye nke ndozi.
Ngwongwo iwu, usoro ego na nhazi nke na-emetụta nhazi na titing nke ala, ikike mmepe, oke nke ọdịmma mmekọrịta, nchịkwa nke ụkpụrụ ala, iji usoro ihe gbasara mpaghara, mmelite nke agbata, a ga-enyocha nyocha. Oru ndi mmadu n’iru mmepe obodo, inweta ala nke ndi mmadu, ugwo nke ihe ha, na ikwado ihe eji eme ala bu ihe ndi ozo.
Nzukọ a na-ejikọta nzukọ na ihe ngosi dị na ngwa, ndị ọzọ na-enye obere nkuzi a na-enye n'otu oge, ka ndị sonyere nwere ohere nwee ohere iji mikwuo emie usoro na arụmọrụ nke ngwa ọ bụla. Ndi okacha nke Latin America ga-akuzi ma nzuko na nke obere aka iji muta ihe aka di iche-iche n’ime ihe eji enyere ndu aka n’ime obodo.
Ọrụ a bụ maka ndị ọchịchị, ndị ọrụ gọọmentị na ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ Latin American, mpaghara na nke mba ndị etinye aka na nhazi na ntinye nke ngwa ntinye aka na njikwa nke iwu ala, yana ndị agụmakwụkwọ mahadum na ndị ọkachamara sitere na ndị na-abụghị ndị otu. Gọọmentị, ya na mmasị na ahụmịhe nke ọdịnaya ahụ.
Otu n’ime isiokwu a ga-atụle bụ:
Onyinye nke ndozi
Inweta ala site na usoro mmefu ego na usoro nchịkwa
Mgbake nke isi ego maka ikike iwu ulo
Nkwekorita nke obodo
Ọha n’ihu ọha nke ikike
Usoro mgbochi na-adịghị mma
Inye ala maka ebe obibi mmadụ 5
Ndị ọrụ nzuzo
Ndị ọzọ a na-atụ ụtụ ụlọ
Nkọwapụta ụlọ iji mee ka ụlọ mmadụ na-elekọta mmadụ bụrụ nke ọma
Ngwa ntanetị ga-emeghe n'etiti Jenụwarị 25 na February 18 a ga-emerịrị ya n'akụkụ abụọ. A na-eme akụkụ nke mbụ site na ibe ahụ:
Oge Akara Akara 1
na nke abuo na uzo ozo:
Oge Akara Akara 2
Ọ bụ ihe achọrọ iji mezue ụdị abụọ ahụ n'agbanyeghị na ịchọrọ isonye na nnọkọ naanị ma ọ bụ na nnọkọ na obere ọmụmụ.
Maka ozi ndị ọzọ ịkpọtụrụ:
Previous Post«Previous Kedu ihe ọhụụ na GEO5 mbipute 15
Next Post Nna-ukwu na Atụmatụ Territorial nke UNAHNext »